Varume 6 vanouraya; uye murume ane nyanga yeingi (1-11)
Kutonga kuchatangira panzvimbo tsvene (6)
9 Akabva ashevedzera nenzwi guru ini ndichinzwa, achiti: “Shevedzai vaya vacharanga guta, mumwe nemumwe auye nechombo chake chekuparadza muruoko rwake!” 2 Ndakaona varume 6 vachibva nechekugedhi rekumusoro+ rakatarisa kuchamhembe, mumwe nemumwe akabata chombo chekuputsa nacho; uye pakati pavo paiva nemumwe murume akanga akapfeka nguo yejira, aine nyanga yeingi yemunyori* muchiuno make, uye vakapinda, vakamira pedyo neatari yemhangura.+ 3 Kubwinya kwaMwari waIsraeri+ kwakabva kwasimuka pamusoro pemakerubhi pakwakanga kuri, kukaenda pachidimbati* chepasuo reimba yacho,+ uye akatanga kushevedzera kumurume akanga akapfeka nguo yejira, aiva nenyanga yeingi yemunyori muchiuno make. 4 Jehovha akati kwaari: “Pfuura nemuguta, imo muJerusarema, uise chiratidzo pahuma dzevanhu vari kuchema nekugomera+ pamusoro pezvinhu zvese zvinosemesa zviri kuitwa muguta.”+ 5 Uye akati kune vamwe ini ndichinzwa: “Pfuurai nemuguta muchimutevera, muuraye. Ziso renyu ngarirege kunzwa urombo, uye musambonzwa tsitsi.+ 6 Munofanira kuuraya vese, harahwa, jaya, mhandara, mwana mudiki, nevakadzi.+ Asi musaswedera pedyo nemunhu wese ane chiratidzo.+ Munofanira kutangira panzvimbo yangu tsvene.”+ Saka vakatanga nevakuru vaiva pamberi peimba yacho.+ 7 Akabva ati kwavari: “Svibisai imba yacho, muzadze zvivanze nevanenge vaurayiwa!+ Endai!” Saka vakaenda vakauraya vanhu muguta. 8 Pavakanga vachivauraya, ini ndega ndini ndakasiyiwa, uye ndakapfugama, ndikadzikisa musoro wangu, ndikashevedzera ndichiti: “Maiwee, Changamire Ishe Jehovha! Pamuri kudurura hasha dzenyu paJerusarema muchaparadza vaIsraeri vese vakasara here?”+ 9 Saka akati kwandiri: “Kukanganisa kweimba yaIsraeri neyaJudha kwakakura zvisingaiti.+ Nyika yazadzwa nekudeura ropa,+ uye guta razara neuori.+ Nekuti vari kuti, ‘Jehovha abva munyika, uye Jehovha haasi kuona.’+ 10 Asi ini, ziso rangu harizonzwi urombo; uye handizonzwi tsitsi.+ Ndichaunza pamisoro yavo zvinoenderana nezvavakaita.” 11 Ndakabva ndaona murume uya akanga akapfeka nguo yejira aine nyanga yeingi muchiuno make achidzoka neshoko rekuti: “Ndaita zvese zvamandirayira.”
^ Kana kuti “mudziyo wekuisira ingi wemunyori.”